Sidaan meelo badan oo hoyga suugaanta ee www.doollo.com ka mid ah ku xusnay, nolosha Sayid Maxamed waxay ahayd nolol saaqan oo ay saaqday wadaniyad iyo siyaasad ku dhisan la dagaalanka gumaysiga iyo kasbashada qabaa'ilka Soomaaliyeed. Dhinac walba haddii aad ka eegto, waxaad qiraysaa in siyaasadi gundhig u ahayd tallaabo walba oo uu Sayidku qaado. Gabayadiisa, guurkiisa, degaankiisa iwm wuxuu qadarinta ugu weyn Sayidku siin jiray maxsuulka siyaasiga ah ee ka dhalan kara.
Meelaha aad si degdeg ah u xaqiijin karto noloshaa siyaasadaysan waxaa kamid ah guurkii Sayidka. Sayid Maxamed dumarkii uu guursaday waxaa ka mid ahaa Faadumo Islaan Aadan oo la dhalatay oday hoggaamin jiray laf lafaha Majeerteen ka mid ah oo la odhan jiray Faarax Islaan Aadan. Sayidku wuxuu danaynayey inuu taageero iyo garabgalba ka helo degaanka ninkaasi ka taliyo. Yarad iyo xurmo badan oo nooc walba leh ayuu Sayidku dhiibay. Xurmadaa uu Sayidku guddoonsiiyey Faarax Islaan waxaa ka mid ahaa geel iyo fardo badan.
Intaa ka dib, waxaa degaankii Faarax Islaan yimid niman Isaaq ah oo doonayey inay Sayidka iyo Faarax Islaan iska hor keenaan. Waxay nimankaasi Islaan Faarax ku yidhaahdeen 'Sayidku labadeena degaanba waa u col, wuuna ina kala gaabinayaa ee aan si wadajir ah uga hortagno.' Islaan Faarax wuxuu yidhi, "Sayidka waanu xididnay, xumaanina nooma dhexayso sidaa awgeed sabab aan u collaysto ma garanayo." Waxay dabeed ku yidhaahdeen 'haddii uu xididtinimo kugu qadarinayo car wakaase ha ku siiyo faraska uu aadka u jecel yahay ee uu geeraarka amaanta ah u mariyey.' Waa faraskii caanka ahaa ee Xiin-finiin.
Haddaba Faarax Islaan Aadan wuxuu Sayidka usoo diray waraaq uu ku waydiisanayo faraskii Sayidku aadka u jeclaa ee Xiin Finiin. Daraawiish oo dhan gaar ahaan Sayidka fardaha xaggooda lagama mari jirin, Xiin Finiina kuwa uu Sayidku ugu jecel yahay ayuu ka mid ahaa. Hase ahaatee, Sayidku deeqsi is nacay ayuu ahaa, dhagxumada iyo xanta la xidhiidha xididka iyo waxbixinta guud ahaanbana wuu iska dhawri jiray. Sidoo kale wuxuu Sayidku ka warhayey nimankaa warxuma-tashiilka ugu yimid Islaan Faarax.
Sidaa awgeed Sayidku wuxuu go'aansaday inuu Xiin Finiin bixiyo. Laakiin wuxuu tiriyey gabay arintaa taariikhdeeda xafiday oo ina soo gaadhsiiyey, xilligaa dadkii noolaana wada maqashiiyey. Ninkii xaashida keenay oo la odhan jiray Faarax Dhaban-Senge ayuu faraskii gudoonsiiyey gabayganna qaybsiiyey si uu u gaadhsiiyo Faarax iyo Soomaali oo dhan. Wuxuu yidhi Sayidku:
Xayow Faaraxow hadal rag waa, loo xutubiyaaye
Nin xishood leh baan ahay haddaan, lay xistiyihayne
Xabiib baan ahaa jeer kufriga, laygu xaasidaye
Adna xaashi baad iila timid, xaakin soo diraye
Xaddigii adduunyada haddaad, xoolo iga dooni
Marna anigu kaama xistiyeen, xaalaad leedahaye
Inaan kuu xaf gooyaan jeclaa, geel xawaar badane
Kumanyaal xawaadaan lahaa, xawd u sii mariye
Markaad Xiin Finiin damacday baan, kaa xanuunsadaye
Walaalow xirgiga qaarkii waa, lagu xujoobaaye
Waxaan kugu xutubiyaaba waa, xuuradaan nahaye
Nin kalaan xafiilaba adaan, xaayda kaa rogaye
Xigto iyo qaraabiyo hadduu, xidid i weydiisto
Xayow iyo qayuumeey haddii, la igu xoodaansho
Xubigayga kuma hayn inaan, xiisow bixiyaaye
Xamar weeye oo midab fardood, kala xariir roone
Xawaariyo kabtiyo raaxo iyo, xawli iyo jeefag
Xaggii loo eryaba waa gammaan, xulashadiisiye
Xubna toosanlow neefku waa, xaalad gooniya e
Goortaan xusuus ula noqdaa, xiisa ii qabanne
Waxaan xarafka diimeed ahayn, igaga xeel dheere
Xarbaddiyo jihaadkaan lahaa, xoogsi ugu fuule
Isagaan xatooyada lahaa, xuurta ugu looge
Xiniinyaha ku goo baan lahaa, gaalka xaylka lehe
Xayskaa da'aayaan lahaa, Xallin ka dooyeeye
Xaqaygii maqnaa baan lahaa, xag ugu raacdeeye
Meesha iyo xeebtaan lahaa, xiito ka eryoode
Xujey-reebta Reer Hagar anoon, xabashyadii ruubin
Xinjoortoda dhiigga leh haddaan, lagu xaraaraysan
Xaaqaamaquuqiyo haddaan, xaaluf laga yeelin
Xiddaysane ma dhiibeen anoon, xaaladday bogane
Xaaraami unbaa arlada, xula abidkiise
Wax unbay xushleeyaan sidii, Xabashi-Iidoore
Aniguna xogtaydaan ka baqi, inay xumeeyaane
Xaashaa Lillaahiye nin gob ah, xamasho waw ceebe
Goorteer anoo xaajiyaan, xinif awoodayne
Intii aniga lay xaman lahaa, xil iga soo meerye
Aduu galabta kuu xoolo yahay, Xamarkii dheeraaye
Waa Xiin Finiin neefka aad, xadhigga haysaaye
Xayawaanka oo idil naftey, kala xaroodaane
Mar hadduu suldaan igu xil lihi, igaga xayddaantay
Xadhiggiisa qabo aadmi kale, kuma xurmeeyeene.